Ubisi lwekhamera ikhambi lezifo ezinjengesifo sikashukela nomdlavuza - i-Afrikhepri Fondation
Ubisi lwekamela ukwelapha izifo ezifana nesifo sikashukela nomdlavuza
Funda: 4 imiz
Lubisi lwamakamela lwaziswa ngokwesiko laso ngokulwa nokutheleleka, ukulwa nomdlavuza, izindawo ezilwa nesifo sikashukela kanye nokuvuselelwa kweziguli ezisanda kubuya; ikakhulukazi ama-antibacterial factor, i-insulin, uvithamini C kanye nezakhiwo ezingama-bacterial lactic acid ezikhona emikhiqizweni eyenziwe ngamakamela.
Izici zokulwa namagciwane
Phakathi kwezici ze-antimicrobial, omunye uzogcina ikakhulu: i-lactoferrin, i-lysozyme, i-lactoperoxidase nama-immunoglobulin.
I-Lactoferrin (LF) i-glycoprotein edlala indima ekulawuleni ukwanda kwamagciwane athile, njengeStaphylococcal aureus noma i-Escherichia coli. Kodwa-ke, ligcwele ubisi lwamakamela kusukela i-30 itholakala izikhathi ezingu-100 ngaphezu kobisi lwezinkomo.
I-Lactoferrin idlala indima ebonakalayo ekwelapheni ukwelashwa okuthile kanye nemiphumela yayo yokuphikisana nayo iye yahlolisiswa, ikakhulukazi kumagundane.
I-Lysozyme yiprotheni eyenziwa ngokwemvelo emasimini aseMammalian lapho kuyisici esiphezulu se-antimicrobial factor.
Inani lysozyme eziqukethwe ubisi ikamela ingaphezu kwe ngobisi izinkomo ', 15 100 UG ml-1 ngokumelene 7 100 UG ml-1.
I-Lysozyme kusuka ebisi lwekamela ukuphikiswa komshini. A 85 10 ° C imizuzu, ubisi lysozyme Ikamela limelela% 44 kuphela ukubaluleka kokuqala, ngokumelene 26% ngoba ubisi inkomo kanye 18% ngoba ubisi inyathi e izimo ezifanayo.
I-IgGs idlala indima emasosheni omzimba emasosheni. Izinga lama-immunoglobulin liphakeme kakhulu ku-colostrum kuzo zonke izilwane ezincelisayo. Kodwa-ke, ukuhlushwa kwama-immunoglobulin ebisi kuhlukahluka ngokwezinhlobo ezithintekayo.
Inhlangano yamakhemikhali omzimba wezinkambo ezinzima ahluke ngokuphelele kulokho okuyaziwa kwamanye ama-vertebrates.
Kusukela kwendawo yokubuka, ikhamera yeGam isondelene nama-immunoglobulin abantu kunamanye ama-ruminants.
I-IGg enkulu ku-colostrum yi-0,26 ± 0,232 mg / ml. Ihlala phakathi 18 futhi 30 ambalwa luzelwe Ngo ubisi, emakamu ingaphansi kodwa okuqukethwe ezisohlwini ubisi ikamela kane obukhulu kunobukaJohane inkomo 0 ° C futhi kasithupha ephakeme e 65 ° C. Ngakolunye uhlangothi, kunamandla okushisa: 0,048 mg / ml we-IgG ihlala ngobisi lwekamela ku-85 ° C kanti iyanyamalala ubisi lwezinkomo.
I-Antidiabetic factor: i-insulin
Intuthuko isimo glycemic kubantu abanesifo sikashukela ziphathwe ubisi ikamela kungenxa yokuba khona insulin inqwaba izikhathi 5000 ukuqakatheka ebonwe izinkomo futhi 1000 izikhathi ukubaluleka ebonwe abesifazane (52 IU / l) .
I-insulin ivame ukungenelelanga uma ubisi lwekhanda esiswini ngenxa ye-asidi ye-medium, kodwa akubonakali ukuthi amakhekhe amakhekhe ekamela njengamanye ama-species, i-insulin ingagcinwa ingaguquki. emathunjini lapho ingafakwa khona.
Kunoma yikuphi, kubonakala sengathi ukusetshenziswa okuvamile kokisi lwamakamela kunomphumela we-hypoglycemic and regulating on levels of blood glucose kwiziguli ezixhomeke kwi-insulin.
Izinto ezikhuthazayo: I-Vitamin C
Amazinga vitamin C ubisi ikamela kuyinto 3 izikhathi ukuthi ubisi cow sika, ngokwesilinganiso ± 37,4 11,0 mg / l, futhi uyahluka 26,2 61,1 MG / L. Idumela lamakamela ekamera ikakhulukazi ngenxa ye-vitamin C. ephakeme. Ubisi lwekhamela yiwona ocebile kakhulu kule vithamini okuyinto indima ye-tonic yokulwa nokukhathala nokutheleleka.
I-Vitamin C inendima enkulu yezinto eziphilayo ngezindawo zayo zokulwa ne-antioxidant. Muva nje, kuboniswe ukuthi kunomthelela omuhle ekuphenduleni kwegciwane lomzimba wezinto eziphilayo ezihlaselwe izifo ezihlukahlukene.
Ukunciphisa ubisi lwekamela
Ubisi obubandayo ikakhulukazi uma kubuningi, ezivela ezilwaneni eziningana cishe ziqukethe ama-microorganisms e-pathogenic kumuntu. Ngaphandle kokuqinisekile ukuthi ukukhiqiza izilwane kuphelile kahle, ukuhlanzeka kwangokwesimanje kudinga ukuba ubisi oluhlaza, futhi ikakhulukazi ubisi oluhlaza, luphathwe ngendlela yokuvimbela ukuwohloka okusheshayo kuphela kodwa futhi nanoma iyiphi ingozi ukungcoliswa kwabathengi.
Iminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho nokuhlolwa kuye kwabonisa ukuthi ukwelashwa okwanelisayo kunayo yonke yalezi zinhloso, okubangela ukuthi ushintsho oluncane ekubunjweni, ukunambitheka nokwamukelwa kwebisi, kungukungasebenzi.
I-pasteurization ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekusetshenzisweni ubisi. Uma kwenziwa kahle, le misebenzi izokwandisa impilo yesheluli yobisi.
Ubisi lwekhamera 500ml (Frozen) (amabhodlela ama-4)
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 58,75
Thenga i- € 58,75
I-100% yobisi lwamakamela olumsulwa oluyimpuphu oluvela e-Emirates / Guaranteed ngaphandle kokungezelelwa kokufakelwa / ...
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 66,34
Thenga i- € 66,34
Ubisi lwekamela ekwelapheni inyanga eyodwa
Ikamela lobisi lwekamela, i-100 gram sachet, ehlanganiswe eFrance.
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 19,90
Thenga i- € 19,90
Amathini amaningi ayi-6 obisi olude lwe-MILK OF CHAMELLE LIQUID 235 ml
Kugcine ukubuyekezwa ngoNovemba 24, 2020 4:45 PM
Nge: IMFIHLO YASARAHARA
I-Tribute ku-Cheikh Anta Diop
Imikhosi kaSigui phakathi kwezinja
Buka i-Kirikou namadoda nabesifazane (i-2012)
Amandla Wokwethemba - Brian Tracy (Audio)